१xbet पुस्तक निर्माता
1xbet संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय पुस्तक निर्माता हो, सबैले एक न एक तरीकाले उनको बारेमा सुनेका छन्, उनीहरूलाई पनि जो खेल र क्यासिनोको संसारबाट टाढा हटाइएको छ. कम्पनी मा सिर्जना गरिएको थियो 2007, कार्यालयले तुरुन्त केही जग्गा आधारित शर्त स्थलहरू सेट अप गर्‍यो. बिस्तारै घर विस्तार हुन थाल्यो र भित्र आयो 2012 अनलाइन शर्तहरू स्वीकार गर्न मसँग पहिले नै पूर्ण वेबसाइट थियो. 1xbet नेदरल्याण्डको कम्पनीको लाइसेन्स अन्तर्गत काम गरिरहेको थियो, Curaçao मा कन्सर्ट गरिएको. को उद्देश्य को लागी 2012 घर भन्दा बढी थियो 400 locales de apuestas terrestres.
अर्को दुई बर्षमा बुकमेकर भन्दा बढी खोलियो 200 सीआईएस देशहरूमा जुवा स्थलहरू. यति चाँडो शर्त घर को गतिविधि विकसित भयो, कि छोटो समय मा घर कब्जा गर्न मा सक्षम थियो 500.000 तपाईंको कम्प्युटरमा प्रयोगकर्ताहरू. 1xbet नेदरल्याण्डमा सबैभन्दा लोकप्रिय छ, पोर्तुगल र बेल्जियम, pero sobre todo en Italia.
धेरै पटक बुकमेकरले प्रख्यात फुटबलरहरूलाई यसको प्रचार अभियानमा भाग लिन आमन्त्रित गर्छन्; त्यसो भए, इटालियन फुटबलर एन्डिया पिरलो कम्पनीको अनुहार बन्न पुगे. यस घरले इटालियन सेरी ए लिग र बार्सिलोना जस्ता प्रख्यात फुटबल क्लब सहित फुटबल च्याम्पियनशिप प्रायोजक गर्दछ।, लिभरपूल वाई चेल्सी.
इन्टर्नेटमा सक्रिय पदोन्नतिले १xbet घर तेस्रो महत्त्वपूर्ण विज्ञापनदाता बनाएको छ, solo precedido por google y pepsico.
को विश्लेषक अनुसार 2020 १xbet सट्टेबाज पदोन्नति गरियो 51 देशहरू, y se encuentra entre las diez casas de apuestas más populares del mundo.
१xbet मा व्यक्तिगत खातामा लगईन गर्नुहोस्
एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
सेक्सन र अनुप्रयोगहरूको उपलब्धता
जम्मा अधिभार र कोष फिर्ता
पुस्तक निर्माताले यसको आधिकारिक वेबसाइटमा अनलाइन शर्तहरू स्वीकार गर्दछ. खेलाडीहरू सबै खेलहरूमा शर्त लगाउन सक्छन् भनेर चिनिन्छ:
फुटबल भलिबल बास्केटबल हकी
टेबल टेनिस ब्याडमिन्टन डार्ट्स क्रिकेट
साइबर खेलहरू बेसबल ह्यान्डबल स्नूकर
यूएफसी अष्ट्रेलियाली फुटबल बायाथलॉन वाटर पोलो
वाटर पोलो मार्शल आर्ट बरफ मा स्पीड स्केटिंग स्की
स्काई जम्प ब्यान्डी चेस फ्लोरबल
कार्यक्रमहरू प्रत्येक खेलको लागि तालिकाबद्ध हुन्छन्, अनौठो, र साथै परिणाम भेरियन्टहरू जुन प्लेयरले एक शर्त राख्न सक्दछ.
आधिकारिक वेबसाइट यसको प्रयोगमा आदिम छैन, तर यदि यो समर्पित छ5मिनेट सबै अध्ययन गर्न फिट हुनेछ. सबै ट्याबहरू एक अर्कासँग सापेक्ष रूपमा राम्रोसँग स्थित छन्, त्यसो भए तपाईको स्थान सम्झने समस्या हुँदैन.
1xbet लामो समय देखि सट्टेबाजी बजारमा छ, तर आधिकारिक वेबसाइट को रूप मा, यो धेरै आधुनिक छ. डिजाइनबाट नेभिगेसन सम्म, घर समयमै साइट अपडेट गर्दछ, यदि त्यहाँ गल्ती छन्, सब भन्दा छोटो समयमा हटाइन्छ. यो खेलाडीहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि ती समस्याहरू समयमै लोड हुन्छन्, विशेष गरी जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खेल्न चाहन्छन् को लागी.
आधिकारिक वेबसाइट अवरोध बिना काम गर्दछ 24/7, र साइटको प्रत्येक पृष्ठको तल एक अनलाइन च्याट सहायक विन्डो छ जहाँ तपाईं कुनै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ र केही मिनेटमा जवाफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।.
खेल र क्यासिनो बाहेक, खेलाडीहरू चलचित्र र टिभी श्रृंखलामा शट लगाउन सक्षम हुनेछन्, किनभने धेरै फिल्म प्रिमियरहरू कोरोनाभाइरस महामारीको स्थितिका कारण स्थगित गरिएको छ. अरु के छ त, कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कारहरू पूर्ण रूपमा रद्द गरिएको छ.
घर मा तपाईं निम्न रोचक दांव बनाउन सक्नुहुन्छ:
शर्त वर्णन भेरियन्ट्स
नयाँ बन्ड को हुने छ? डेनियल क्रेगको साथ जेम्स बान्ड फिल्म श्रृंखला समाप्त भएको छ, प्रख्यात ब्रिटिशलाई कसले बदल्न सक्दछ?
कसले ओस्कारको समारोहमा स्मारक भिडियोमा अन्तिम देखा पर्नेछ 2021 ओस्कारको डेलिभरीमा, अन्तमा त्यहाँ एक विशेष परम्परा छ, भिडियोले अभिनेताहरू देखाउँदछ जो फिल्मको साथ सम्बन्धित छन र एक वा अरू तरिकामा योगदान पुर्‍याएको छ. सबैजना छक्क पर्छन् कि भिडियोमा देखा पर्ने अन्तिम को होलान्?.
ओलिभिया डे हभिल्यान्ड
अधिकतम भोन Sydow
को सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म 2021 १xbet चलचित्र कोटीमा यो सबैभन्दा लोकप्रिय बेट्स हो, यहाँ एक सूची छ जहाँबाट तपाइँले फिल्म छनौट गर्नु पर्दछ जुन विश्वव्यापी रूपमा बक्स अफिसमा सबैभन्दा धेरै कमाएको छ.
छिटो र क्रोधित 9
मर्न कुनै समय छैन
प्रमोशनल कोड पनि छन्, यस प्रकारको बेट्सको लागि बोनस र पदोन्नतीहरू, घरबाट नवीनतम समाचारहरू सँधै अद्यावधिक रहनको लागि आधिकारिक न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्.
व्यक्तिगत खाता घर को सबै कार्यहरू नियन्त्रण गर्न प्रत्येक खेलाडी को लागी नियन्त्रण पैनल हो.
एकचोटि तपाईले दर्ता फारमका सबै क्षेत्रहरू पूरा गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खाता प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै तपाईंको लागि उपयुक्त कुनै तरिकामा कोष जम्मा गर्न र निकाल्ने, खेल तथ्या .्क हेर्नुहोस्, तपाईं मुख्य खाता र बॉन्डको स्थिति हेर्न सक्नुहुनेछ, र अनलाइन क्यासिनो पनि खेल्नुहोस्. तपाईको व्यक्तिगत १xbet खाता पहुँच गर्न तपाईले माथि दायाँ कुनामा अवस्थित आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ.
यदि तपाईं मोबाईल अनुप्रयोगबाट खेल्नुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत खातालाई आफ्नो मनपर्नेमा अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ. मनपर्ने खण्डमा तपाइँ तपाइँको मनपर्ने खेल र ट्याबहरू थप्न सक्नुहुन्छ र ट्याबहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई आवाश्यक छैन.
प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत खातासँग उनीहरूको प्रमोशनल कोडहरू प्रबन्ध गर्न सबै आवश्यक उपकरणहरू हुनुपर्दछ. "खाता सेटिंग्स" सेक्सनमा प्रयोगकर्ताले क्षेत्र "प्रमोशनल कोड प्रमाणित गर्नुहोस्" देख्न सक्नुहुनेछ, र यसको पछाडि बटन हो "प्रोमोशनल कोड प्रमाणित गर्नुहोस्", जससँग तपाईं प्रयोगको सर्तहरू जान्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक प्रमोश्नल कोडको वैधताको अवधि निर्धारित गर्नुहोस्. तपाईं प्राय: आफ्नो जन्मदिन वा कुनै अन्य छुट्टीको लागि प्रमोश्नल कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. बोनसको रूपमा, बधाई तपाईंको फोन नम्बरमा एसएमएस द्वारा पठाइन्छ. अरु के छ त, यदि तपाईं प्रोमो कोड बिर्सनुभयो भने, डाटा ईतिहासमा बचत हुनेछ र, म्याद सकिने मिति सम्म, तपाईं कुनै पनि समयमा प्रबर्धन-सम्बन्धी कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ.
यदि तपाईंसँग पुरानो कम्प्युटर वा ढिलो इन्टरनेट छ भने, तपाइँ तपाइँको बेट्स मोबाइल संस्करण को माध्यम बाट राख्न सक्नुहुन्छ, जुन उही आधिकारिक साइट हो, सरलीकृत. यसमा तपाईं सबै समान अपरेशनहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ, बेट्स राख्नुहोस्, क्यासिनो खेल्नुहोस्, यस शर्तमा शर्त, केवल धेरै छिटो. मोबाइल संस्करणमा चल्ती विज्ञापन ब्यानर हुँदैन, एनिमेसन, किनकि यो छिटो काम गर्दछ. मोबाइल संस्करण मुख्य एकबाट डिजाइनमा बाहेक भिन्न हुन्छ, उनको सबै कुरा धेरै सरल छ.
उसको पक्षको लागि, आधिकारिक वेबसाइटमा मोबाइल अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न लिंकहरू छन्.
अर्को सुविधा भनेको मोबाइल पृष्ठ पनि डेस्कटप कम्प्युटरबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ. साइट धेरै सरल छ, त्यसैले यसले धेरै यातायात प्रयोग गर्दैन.
त्यसोभए शर्त जति सक्दो सहज छ, १xbet पुस्तक निर्माताका विकासकर्ताहरूले एन्ड्रोइडका लागि अनुप्रयोग सिर्जना गरेका छन्. कार्यक्रम पूर्ण रूपमा आधिकारिक वेबसाइट को नक्कल गर्दछ र खेलाडीहरु लाई पूर्ण संस्करण मा उपलब्ध सबै घटनाहरु मा शर्त गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। 24 दिनमा एक घण्टा.
प्रोग्राम डाउनलोड गर्नका लागि लिंक घरको आधिकारिक वेबसाइटमा छ, यसलाई स्थापना गर्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्. अरु के छ त, तपाईं APK फाइल सेवाबाट प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ.
१xbet को मोबाइल संस्करण राम्रो प्रयोगको लागि विकसित गरिएको छ, तर त्यहाँ समय हुन्छ जब कार्यक्रम काम नगर्न सक्छ, कारण के हुन सक्छ:
निवेदन, केवल वेबसाइट जस्तै, निर्धारित मर्मत आवश्यक छ, के 1xbet अग्रिम चेतावनी दिन्छ. यदि तपाईंले चेतावनी देख्नु भएको छैन भने, साइटको कम्प्युटर संस्करणबाट तपाईंको व्यक्तिगत खातामा लग इन गर्न प्रयास गर्नुहोस्.
केही प्रयोगकर्ताहरू अवैध जुवा खेल्छन्, पासोमा, कि पुस्तक निर्माताले गणना गर्न र खाताहरू ब्लक गर्न सिकेका छन्. हुनसक्छ त्यसैले तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खाता पहुँच गर्न सक्नुहुन्न. खाता अवरुद्धको कारण १xbet मोडरेटरबाट पनि गल्ती हुन सक्छ, जुन केसमा तपाईले बुकमेकरको समर्थन सेवामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ.
१xBet प्रोग्राम घर साइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, तर आधिकारिक गुगल प्ले सेवाहरूबाट होईन, गुगल नीति जुवा को प्रयोग निषेध को रूप मा.
Ios को लागी प्रोग्राम डाउनलोड गर्नु धेरै सजिलो छ, App Store बाट, अनुप्रयोगको वजन थोरै छ, त्यसो भए तपाईले यसलाई स्थापना गर्न धेरै समय पर्खनु पर्दैन.
आईफोन अनुप्रयोगमा खेल सुरू गर्न तपाईंले निम्न निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्दछ:
शर्तहरू केवल तब स्वीकार गरिन्छ यदि तपाईं दर्ता गर्नुभयो र जम्मा गर्नुभयो.
शर्त लगाउनु अघि, बोलपत्र प्रस्ताव प्रस्ताव गर्नुहोस्.
प the्क्तिमा तपाईं नजिकको खेल चयन गर्नुहोस्, शुरुवात गर्नेहरूले सामान्यतया फुटबल छनौट गर्छन्.
खेलहरू छनौट गर्न, तिनीहरूले खेल्ने खेलहरू अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईंको लागि सब भन्दा चाखलाग्दोहरू छान्नुहोस्.
तपाईं शर्त बनाउन को लागी परिणाम छनौट गर्नुहोस्, त्यहाँ छन्3मुख्य परिणामहरू: P1- पहिलो विजेता टीम, P2-दोस्रो विजेता टीम, एक्स-टाई.
ध्यानपूर्वक दुबै समूहको खेलहरूका तथ्या .्कहरूको विश्लेषण गर्नुहोस् र अन्तमा तपाईंको अवलोकन चयन गर्नुहोस्.
सबै परिणाम विश्लेषण गरेपछि, तपाईं एक विन्डो देख्नुहुनेछ, शर्त को पुष्टि संग एक कूपन, तपाईंले लगानी गर्न चाहानु भएको रकम प्रविष्ट गर्नुहोस् र "बेट" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंले "आफ्नो स्क्रिनमा शर्त" हेर्नु पर्छ।.
सबै दांव "ईतिहास" मेनूमा देखा पर्नेछ.
तपाइँ तपाइँको @mail को लागी टेक्स्ट सन्देशहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ बेटमा र लोकप्रिय खेलहरूमा सबै जानकारी प्राप्त गर्न समयमै.
घर दर्ता प्रक्रिया धेरै सरल छ, र एक व्यक्तिगत खाता आधिकारिक वेबसाइट मार्फत मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ, एक मोबाइल अनुप्रयोग र साइट को मोबाइल संस्करण को माध्यम बाट. तपाईं धेरै तरीकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया को माध्यम बाट जान सक्नुहुन्छ, अर्थात्:
मोबाइल फोन नम्बरको साथ
दर्ता फारमहरू पूरा गरेपछि र यी कुनै पनि तरिकामा जम्मा गरेपछि, तपाईं बेट राख्न र अनलाइन क्यासिनोमा खेल्न सक्नुहुन्छ. एक क्लिक प्रमाणिकरण अपूर्ण छ, त्यसोभए अचम्म नमान्नुहोस् यदि तपाईं जम्मा गर्न र शर्त गर्न सक्नुहुन्न.
दर्ता मोड + –
इमेल बाट एक पटक दर्ता पूरा भयो, तपाईको खाता पूर्ण रुपमा कार्यशील छ. तपाईं थप दर्ता बिना शर्त राख्न र रकम निकासी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ. सबैभन्दा लामो र गाह्रो. यसको लागि ध्यान र धैर्यको आवश्यकता छ.
"एक क्लिकमा" सट्टेबाजी सुरू गर्न सब भन्दा छिटो तरीका. रेजिष्ट्रेसनको बखत न्यूनतम जानकारी. तपाईं तुरून्तै बाजी राख्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाईंसँग सकरात्मक सन्तुलन छ भने) यदि कुनै कारणले तपाईं आफ्नो पासवर्ड र प्रयोगकर्ता नाम बिर्सनुभयो भने, त्यो मात्र एक पटक दर्ताको समयमा देखा पर्नेछ, तपाईं यो आईपी ठेगाना प्रयोग गरेर नयाँ खाता दर्ता गर्न सक्षम हुनुहुने छैन.
रकम फिर्ता लिनको लागि तपाईंले हराएको पंजीकरण विवरणहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ र तपाईंको खाता पुष्टि गर्नुहोस्.
फोन नम्बरको साथ द्रुत दर्ता.
यस विधिले तपाईंको खाताको लागि उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ, यस प्रक्रियामा एसएमएस-पुष्टिकरण समावेश छ.
भुक्तान प्रणाली फोन नम्बरमा लिंक गरिएको छ, त्यसकारण सम्भव छ लाभको थोरै मात्रामा फिर्ता लिन. यदि तपाईंले आफ्नो सिम कार्ड हराउनुभएको छ भने, तपाईंले कम्पनी प्रशासकहरूलाई सम्पर्क गरेर तपाईंको खाता पुनरुद्धार गर्नुपर्नेछ.
खेल खाताबाट ठूला रकम निकाल्न यो सम्भव छैन. तपाईंलाई तपाईंको व्यक्तिगत विवरणहरू भर्न सोधिनेछ.
सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट द्रुत दर्ता.
तपाईंको व्यक्तिगत डाटा तपाईंको सामाजिक नेटवर्क खाताबाट तपाईंको व्यक्तिगत खातामा सारियो, त्यो घरको वेबसाइटमा सिर्जना गरिएको हो.
तपाईं सामाजिक नेटवर्कबाट बेट्स पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ. सामाजिक नेटवर्कमा प्रयोगकर्ताहरू बेनामी गर्न इच्छाको कारण, पहिचान र प्रमाणिकरण समस्याहरू प्रायः उत्पन्न हुन्छन्. स्वचालित रूपमा स्थानान्तरण गर्दा, प्रयोगकर्ताहरू प्राय: आफ्नो व्यक्तिगत डेटा सम्पादन गर्न बिर्सन्छन्. फलस्वरूप, रकम फिर्ता निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ.
पुस्तक निर्माताको आधिकारिक वेबसाइट धेरै भाषाहरूमा काम गर्दछ, अर्थात्:
रुसी अंग्रेजी फ्रेन्च जर्मन Italiano लात्भियन
फ्रेन्च टर्की अजरबैजान Español रोमानियन यूक्रेनी
खेलाडीहरूले संस्करण छनौट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूलाई उत्तम उपयुक्त हुन्छ.
घर मा तपाईं रूबलमा खाता बनाउन सक्नुहुन्छ, डलर, यूरो, टेन्ज, grivnas, येन र अन्य धेरै मुद्राहरू.
1xbet ले यस सम्बन्धमा कुनै पनि तरिकामा खेलाडीहरूलाई सीमित गर्दैन. यदि तपाईं आवश्यक मान्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो खाताको मुद्रा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.
यसलाई बहु मुद्रामा फरक खाताहरू हुन अनुमति छैन, यो तपाईंको रिकभरि अधिकार बिना तपाईंको गेमि account्ग खाता ब्लक गर्न सक्दछ.
शीर्ष मेनू पट्टीमा धेरै ट्याबहरू समावेश छन् :
बाँया प्यानलले निम्न ट्याबहरू समावेश गर्दछ :
नामबाट खेलकुदहरूको सूची
लाइन. कोटी A-Z
निम्नलिखित मेनू आईटमहरू मेनूको दायाँ फलकमा अवस्थित छन्:
सामाजिक मिडिया समूह पृष्ठहरूमा बटन – फेसबुक वा ट्विटर
तिनीहरूमा भाग लिने अवसरको साथ बोनस र बोनसहरू, "यहाँ प्ले गर्नुहोस्" बटनहरू मार्फत
रंगीन CA १xbet विशेष घटनाहरू लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा दांवको प्रकारका सूचीहरूको ब्लकहरू. खेलाडीले मात्र "प्लेस शर्त" बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ।.
१xbet सट्टेबाज खेलाडीहरूले शर्त विकल्प रोज्न सक्छन्, अर्थात्:
Combinada बस्ने व्यक्ति
र त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि विभिन्न सम्भाव्यताहरू पनि छन्, उदाहरण को लागी:
गेमि account खातामा तपाईंको पहिलो जम्मा गरेपछि, १xbet मा भर्खरै पंजीकृत ग्राहकहरूले पहिलो जम्मा गर्दा उनीहरूले जम्मा गरेको उस्तै रकम स्वचालित रूपमा प्राप्त हुन्छन्. यो पैसा बोनस खातामा हुनेछ, र मुख्य खातामा यसलाई ट्रान्सफर गर्न र यसलाई केही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहोस्, तपाईंले यो शर्त लगाउनु पर्छ.
यसका लागि कम प्रकारको सम्भाव्यता सहित संयुक्त प्रकारको बेट्स बनाउन आवश्यक छ 1,4 प्रत्येक घटना को लागी. तपाईंले शर्त लगाएको पैसा तपाईंको मुख्य खाताबाट कटौती गरिने छ. बोनस कोष उपलब्ध हुनेछ तपाईले चलाउनु भयो र तपाईले रकम जित्नु भए पछि5समय बोनस भन्दा ठूलो छ.
१xbet बुकमेकरमा पहिलो जम्मा बोनस केवल एक मात्र होईन, यहाँ उनीहरूको प्रमोशन को एक धेरै व्यापक कार्यक्रम छ:
P १00०० सम्मको प्याकेजमा स्वागत छ + 150 FS
महापुरुषको लीग возможно
संयुक्त TV BET
खेलाडीहरूले सीए १xbet मा बनाएको बेट्सको लागि, पोइन्टहरू रिचार्ज हुन्छन्, प्रोमो कोड स्टोरमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ. त्यहाँ धेरै सेक्सनहरू छन्, तपाईं विनिमय विकल्प छनौट गर्न सक्नुहुन्छ:
1xbet सँग न केवल रेखा र अनुशासनहरूको एक विस्तृत चयन छ, तर यो रकमहरू पुनः भर्नका लागि र फिर्ता निकाल्ने तरिकाहरू.
क्रेडिट कार्ड: भिसा, मास्टरकार्ड, Privat24. प्रयोगकर्ताको लागि सब भन्दा सुविधाजनक र लोकप्रिय विकल्प. निक्षेप बनाउँदा, बुकमेकरले चयनित कार्ड र रकमको विवरणको लागि सोधे;
भुक्तानी टर्मिनल: सेक्शनमा क्लिक गर्नुहोस् services सेवाहरूको भुक्तान »> १xbet लोगो क्लिक गर्नुहोस् -> खाता नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् -> अपरेशन पुष्टि गर्न मोबाइल फोन नम्बर;
इलेक्ट्रोनिक वालेट र भुक्तान प्रणाली: Yandex पैसा, क्विवी, Skrill, नेटलर, ecoPayz;
मोबाइल अपरेटर: व्यक्तिगत खाता मार्फत रिचार्ज गर्नुहोस्, वा SMS पुष्टिकरण द्वारा;
इन्टर्नेट बैंकि: नail 32 विकल्पहरू;
क्रिप्टोकुरेन्सीहरू: 17 मोडहरू.
कानूनी दिशा: भवन डा।. M. J. Hugenholtzweg Z / N UTC Curaçao नेदरल्याण्ड एन्टिलिस
इजाजतपत्र नम्बर १686868 / JAZ Curaçao.
कम्पनीको स्वामित्व र १X Corp N.V द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ.
info@1xbet-team.com सामान्य सोधपुछ
समर्थन@1xbet-team.com प्राविधिक सहयोग
सुरक्षा@1xbet-team.com सुरक्षा सेवा
marketing@1xbet-team.com सार्वजनिक सम्बन्ध र विज्ञापन
b2b@1xbet-team.com सदस्यता (अनलाइन)
प्रोसेसिंग@1xbet-team.com भुक्तान र स्थानान्तरण
accounting@1xbet-team.com वित्त विभाग
8 (800) 555-51-81 फोन 24/7 हरेक दिन, नि: शुल्क कलहरू